Jasmine Purified Drinking Water | About Us
With reference to the requirement of “Jasmine Drinking Water Factory” to purify the raw water withacapacity of 4m3/hr. Amd had designed and installed the Potable Water Treatment System in accordance with international standards. Amd has now carried out and completed the installation of the equipment at Jasmine Drinking Water Factory. After installation, Amd engineer had carried out the commissioning and test running for the Water Treatment System.
သောက်ရေသန့် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းပုံ အဆင့်ဆင့်
သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်မှု မပြုလုပ်ခင်တွင် ရေကြမ်းအား pH, TDS and Hardness တို့နှင့် အရောင် အနံ့တို့ကို စစ်ဆေးပါသည်။Sand Filter and Activated Carbon Filter တို့ကို Back Wash လုပ်ဆောင်ပါသည်။ထို့နောက် 1 micron PP Filter အား သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် လဲလှယ်ပါသည်။ ၄င်းအပြင် Treated Water အရည်အသွေးအား (pH, TDS, Total Hardness(CaCO3) and Ozone ပျော်၀င်မှု) တို့ကို စက်ရုံ၏ Mini Lab တွင် စစ်ဆေးပြီး မှတ်တမ်းထားရှိစေပါသည်။
သောက်ရေသန့်ဘူးခွံများ၏ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းအဖြစ် ၂၀ လီတာဘူးခွံများတွင် ဘူးအတွင်းအပြင် သန့်ရှင်းမှု၊ အဖုံးများ သန့်စင်မှု နှင့် လေ လုံမလုံ၊ ပါကင်ပလက်စတစ်များ (Cap Seal & Tap Seal) ကောင်းမွန်မှု စသည်တို့ကို သေချာစွာ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါသည်။
ဘူးသေး( ၁လီတာ၊ ၀.၆ လီတာ နှင့် ၀.၃ လီတာ) ထုပ်လုပ်မှုတို့တွင်လည်း ဘူးခွံနှင့် အဖုံးများသန့်ရှင်းမှု၊ လေ လုံမလုံ၊ ဘူးတိုင်းတွင် Expire Date ရိုက်/မရိုက်နှင့် Lable and Cap Seal သပ်ရပ်မှု ရှိ/မရှိတို့ကို သေချာစွာ စစ်ဆေးစေပါသည်။
၀န်ထမ်းများ၏ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုနှင့် သောက်ရေသန့်ထုပ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဥ် အဆင့်တိုင်းတွင် ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာနမှ ပြဌာန်းထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သေချာစွာ ကြပ်မတ်ညွှန်ကြား၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။